ဧပြီတခေါက် ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီရောက်တာ တစ်နှစ်ရှိသွားရောပေါ့။ ဒီမှာ ချယ်ရီတွေပွင့်တယ်။ ကိုယ့်မြေမှာ ရွှေရောင်ဝင်းဝင်း ရနံ့သင်းသင်းနဲ့ ပိတောက်တွေ ဝေနေပြီ။ ဂျပန်တွေက ကချယ်ရီပန်းကြည့်ပြီး ပျော်ကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ အုအဲနိုပန်းခြံရော အိမ်နားကပန်းခြံတွေ လိုက်လည်ပြီး ကြည့်လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ပေါ့။
ချယ်ရီတွေက လှပါတယ်။ ကြည့်လို့လဲကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေလိုတော့ မပျော်မိတာ အမှန်ဘဲ။
ပိတောက်ကို မြင်ရရင် ထခုန်မိမတတ် ပျော်မိမှာ အမှန်ဘဲ။ ကိုယ်တိုင်က အအေးမခံနိုင် (ဖျားနာလွယ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမို့) ရေမကြိုက်ပေမယ့် ရေပက်သူတွေကြည့်ပြီး ပျော်ခဲ့တဲ့အပျော်တွေ ခုထိ သတိရဆဲ။ အမေ့ရဲ့ သင်္ကြန်ထမင်းနဲ့ သရက်သီးငါးပိကြော်စပ်စပ်လေးကိုရော...။ တစ်ယောက်ထဲဖွင့်ပြီးနားထောင်ရတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းက ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ရယ်။ မွေးရပ်မြေမှာ အမေ၊ အဒေါ်တွေနဲ့အတူ ညဘက် မြို့လယ်ခေါင်က ပြည်နယ်မဏ္ဍပ်မှာ သင်္ကြန်ယိမ်းသွားကြည့်တာ သတိရတယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မိသားစုနဲ့အတူ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ရေမပက်ရတဲ့နေ့ကို အနောက်ကနေ တိတ်တိတ်လေး ရေဇလုံကြီးနဲ့လောင်းဖို့လာတဲ့သူကို မောင်ဝမ်းကွဲလေးက ဆောင့်တွန်းပြီး ရေတွေမှောက်အောင်လုပ်ပြစ်ပြီး "မတူး၊ မမို့ ပြေးပြေး"လို့ အော်ခဲ့တာတွေ၊ ရေအလောင်းခံရလို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းထော် ပွစိပွစိလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ လွမ်းတယ်။ ပိတောက်တွေအပြင် ငုပင်တွေအရမ်းပေါလို့ ငုတွေဝင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေ လွမ်းတယ်။ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမယ့် ဒီမှာအပြင်သွားတိုင်း ပိတောက်ကို ရှာမိတယ်။ တစ်ပင်လုံး ဝါဝါဖတ်တွေနဲ့အပင်ကိုတွေ့ရင် ငုပင်လားလို့ အပြေးသွားကြည့်ရတာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲနော်။ ရာသီဥတုမှ မတူတာကိုး။ လွမ်းရပါတယ် ပိတောက်ရယ်......
Posted by မြရွက်ဝေ at 4:51 PM
ပိတောက် လွမ်းတာချင်း တူတူပဲ ... ဒီမှာ သပြေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တော့ ရှိတယ် :P
ညီမလေးရေ... အမကို လာအားပေးတာ ကျေးဇူး.. :D ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အားပေးနေရတာပါပဲ.. :)
ueno park က ချယ်ရီတွေ တအားလှတာပဲနော်။ အမ တခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ အမတော့ ပိတောက်ပန်းကို သိပ်မကြိုက်ပေမယ့်လေ ပန်းနံ့သင်းသင်းလေးကို လွမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ရေမကစားပဲ သူများကစားတာ ထိုင်ကြည့်ရတာလည်းလွမ်းတယ်။ ညတိုင်း တီဗွီကလာတဲ့ သင်္ကြန်အကတွေလည်း လွမ်းတယ်။ မုန့်လုံးရေပေါ်လည်း လွမ်းတယ်.. ရွှေရင်အေးလည်းလွမ်းတယ်.. အဟီး.. လွမ်းတာတွေ များသွားပြီ.. :P သင်္ကြန်အတက်နေ့မှာ ရေလောင်းသွားတယ်နော်.. ရေခဲရေနဲ့...
နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ... :)
Daw Mothlay ...
Come c me...
ဒီမှာတော့ ပိတောက်တွေ ပွင့်တာ မြင်ရပေမယ့်လဲ .. လွမ်းတာကတော့ လွမ်းတာပဲ .. =)
ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဗျာ. များများထပ်တင်ပေးပါဗျို့...
have faith..someday somehow..we shall all go back..and enjoy teh beauty of our very own motherland!!
ps: hope ur family and loved ones in myanmar..are safe and sound and well naw ..